Piwik: Mepee Isi Nchịkọta Weebụ | Martech Zone
Thursday, May 8, 2014 Tọzdee, Nọvemba 6, 2014 Douglas Karr
Piwik bụ mmeghe nchịkọta ikpo okwu nke ndi mmadu, ulo oru na ndi ochichi nile n’uwa nile ji eme ihe ugbu a. Na Piwik, data gị ga-abụ nke gị. Piwik na-enye atụmatụ siri ike nke atụmatụ gụnyere akụkọ ndekọ ọnụ ọgụgụ: isi okwu dị elu na engines ọchụchọ, weebụsaịtị, URL kacha elu, aha peeji nke, mba ndị ọrụ, ndị na-eweta, sistemụ arụmọrụ, ahịa ahịa nyocha, mkpebi ihuenyo, desktọọpụ VS mobile, njikọ aka (oge na saịtị) , peeji nke kwa nleta, nleta ugboro ugboro), mkpọsa kachasị elu, mgbanwe dị iche iche, ntinye ntinye / ụzọ ọpụpụ, faịlụ ebudatara, na ọtụtụ ndị ọzọ, nkewapụtara n'ime isi anọ nchịkọta akụkọ edemede - Ndị ọbịa, Omume, Ndị Ntugharị, Ebumnuche / e-Azụmaahịa (akụkọ 30 +).
Piwik na-enyekwa ndị ọrụ aka ọkachamara yana azịza akwadoro akpọrọ Piwik Pro ebe uzo gi nke Piwik ka akwadoro ma jikwaa ya n’igwe ojii. Nke a bụ ihe Mgbakwunye dere maka 30% Gbanyụọ ndenye aha ọnwa 6 maka atụmatụ Piwik Cloud niile.
Piwik Web Analytics Atụmatụ
Real oge data mmelite - Lelee oge nleta nke nleta na weebụsaịtị gị. Nweta echiche zuru ezu banyere ndị ọbịa gị, ibe ha gara na ihe mgbaru ọsọ ha kpatara.
Customizable Dashboard - Mepụta ọhụụ ndị ọhụrụ na nhazi wijetị dabara na mkpa gị.
Dashboard Weebụsaịtị niile - Bestzọ kachasị mma iji nweta nyocha nke ihe na-eme na weebụsaịtị gị niile n'otu oge.
Ozo Evolution - Ugbu a & gara aga metric data maka usoro ọ bụla na akụkọ ọ bụla.
Nchịkọta maka azụmahịa e-commerce - Ghọta ma melite azụmaahịa gị n'ịntanetị site na azụmahịa e-commerce dị elu nchịkọta atụmatụ.
Mgbaru ọsọ ntụgharị nsuso - Sochie mgbanwe dị iche iche ma chọpụta ma ị na-ezute ebumnuche azụmahịa gị ugbu a.
Ndepụta Ihe - Tụọ mmekọrịta ọ bụla nke ndị ọrụ na weebụsaịtị na ngwa gị.
Nchịkọta Ọchụchọ saịtị - Sochie ọchụchọ eme gị esịtidem search engine.
Geolocation - Chọta ndị ọbịa gị maka nchọpụta ziri ezi nke Mba, Mpaghara, Obodo, Nzukọ. Lelee onu ogugu ndi nleta na World Map site na Mba, Mpaghara, Obodo. Lelee ndị ọbịa kachasị ọhụrụ gị n'oge.
Pages gafere - Ele ihe ọbịa mere tupu, na mgbe ị na-elele kpọmkwem na peeji nke.
Peeji Peeji - Ngosiputa onu ogugu n’elu webusaiti gi site n’iji nka weputa ihe.
Ọsọ ọsọ ọsọ & akụkọ ọsọ ọsọ - Na-edekọ etu websaịtị gị si agbapụta ọdịnaya nke ndị ọbịa gị.
Sochie mmekọrịta onye ọrụ dị iche iche - Akpaka nsuso nke faịlụ faịlụ, pịa na mpụga njikọ weebụsaịtị, nhọrọ nhọrọ nke 404 peeji nke
Nchịkọta mkpọsa nchịkọta - Na-achọpụta ihe nyocha Google Analytics na akpaghị aka na URL gị.
Sochie okporo ụzọ site na engines ọchụchọ - Karịrị 800 dị iche iche engines ọchụchọ!
Ezigbo ozi ịntanetị (akụkọ PDF na HTML) - Tinye akụkọ na ngwa gị ma ọ bụ weebụsaịtị (40 + Widgets dị) ma ọ bụ tinye PNG Graphs na ibe ọ bụla, email, ma ọ bụ ngwa ọ bụla.
Nkọwa - Mepụta ederede ederede na eserese gị, iji cheta ihe omume ụfọdụ.
Enweghị oke data - can nwere ike ịdebe data gị niile, na-enweghị oke nchekwa ọ bụla, ruo mgbe ebighi ebi!
Tags: Isi mmaliteemeghe iyi nchịkọtaemeghe nchịkọta weebụPiwikpiwik proweb analytics